Xiisaha ay dhallinyarada u hayaan siyaasadda oo kor u kacay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xiisaha ay dhallinyarada u hayaan siyaasadda oo kor u kacay
La cusbooneeyay onsdag 19 april kl 13.38
La daabacay onsdag 19 april kl 09.04
Fikrradaha siyaasadeed ee dhallin-yarada
Laba hablood gacanta is haysta oo suuq dhex maraya. sawir: Kallestad, Gorm
Daraasad ay wax ku waydiisay shirkadda saadaalinta cabbirka (baaroomitir) dhallin-yaro da'doodu u dhexeeyso 15-24 fikirradooda la xiriira su'aalaha bulshadu xiiseeyaan ayay ku caddaatay inay kor u kacday xiisaha dhallin-yaradu u qabaan siyaasadda sannadihii ugu dambeeyey.
Tirada dhallain-yarada sheegtay iney xiise ballaaran u hayaan siyaasadda ayaa kor u gaartey 42%, kolka loo barbar-dhigo tiradaasi oo gaarsiiseyd 28% muddo 14 sannadood iminka laga joogo.
Halka dhanka kale ay bar tiradaasi sheegeen in aaney aaminsaneyn in siyaasaddu xalin karto dhibaatooyinka Sweden ka aloosan. Kalsoonida ugu ballaaran ayey dhallin-yaradu u hayaan ciidanka ammaanka, halka ay midda ugu hooseeysa u hayaan xisbiyada siyaasadda. Sidoo kale waxey taageerada ey u hayaan ay hooseeysaa xafiiska shaqada, halka bangiyada, hayadaha dar-yeelka caafimaadka iyo iskuullada ey u hayaan taageero sarreeysa.
- Dhallin-yaradu waxay inta badan ka hadashaa siyaasadda Sweden iyo midda mareeykanka iyo madax-weyne Donald Trump, waana mid uu shakhsi waliba fikirkiisa gaarka ah ka qabo, sidaa waxaa sheegay Moisses Kilström, 18-jir dhigta mid ka mid ah dugsiyada sare ee magaalada Stockholm. Kilström iyo asxaabtiisa ayaannu kula kullaney barxadda bannaanka ee xarunta baarlamanka Sweden oo ey maanta booqasho ku joogeen. Isagoo hadalkiisii sii watana sheegay in qaar badan oo ka mid ah dhallin-yaradu xiiseeyaan siyaasadda, hase yeeshee uu mid waliba fikirkiisa gaarka ah ka qabo:
- Siyaasadda waannu ka hadalnaa, laakiinse siyaasaddu maahan midda keliya oo aannu ka hadalno, sida uu sheegay.
Wareeysiyada lala yeeshay dhallin-yarada ayay sidoo kale ku caddaatay badankood iney fikirradooda siyaasadeed xigaan dhanka xisbiyada garabka midig (Alliansen) 55%, kolka loo barbar-dhigo xisbiyada garabka bidix (röd-gröna) oo gaarsii-san 51%.
- Fikirka siyaasadeed ayaa ah mid ka yimaada guriga iyo waalidka uu dhallaanku ku nool yahay iyo sidoo kale fikirkiisa u qaaska ah. Balse uu Moisses sheegay inakstoo aannu weli horay u codeeyn ay siyaasaddiisu u jan-jeedho dhanka garabka bidix ee Casaan-cagaarka.
- Aniga ahaan waxaan fikraddaha aan waalidka ka qaatay kuwo ka badan ayaan keliday yeeshay. Hadda ma hubo, laakiinse waxaan u janjeeraa inaan u codeeyn doono dhanka xisbiyada garabka Casaan-cagaarka, sida uu sheegay Moisses Kilström oo markii ugu horreeysay codeeyn doona doorashada foodda innagu soo haysa.
Baarista laga qaaday dhallin-yarada da’doodu u dhexeeyso 15-24-jirka ayaa sidoo kale lagu ogaadey inaaney dabaqadda iyo taageerada loo hayo garabyada siyaasaddu wax xiriir ah la lahayn dabaqadda uu shakhsiigu ka soo jeedo ama ay saameeyntaasi tahay mid fudud. Tusaale ahaan 17% dhallin-yarada sheegtay iney u codeeyn lahaayeen xisbiga Socialdemokraterna ayaa isu arka iney ka soo jeedaan dabaqadda shaqaalaha.